Nepal: Vola Ilaina Ho anà Fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2018 16:18 GMT
Miresaka ny filàna ho an'ireo zanaka ampielezan'i Nepal ny Democracy For Nepal, DFN, mba hahazoana vola ho an'ny hetsika ho an'ny demokrasia ao Nepal: tsy ampy ny fanohanana ara-moraly fotsiny. Ny hevitra dia ny hanombohana fikambanana iray ho amin'io raharaha io.
Tsy safidy ananan'ireo zanaka ampielezana ny hidina an-dalambe ao Nepal, ho gidragidrain'ny polisy na ho faty voatifitra. Izay no antony anaovan'ny diaspora izay zavatra hafa azony atao, ary ny vola no fanalahidy. Tokony handany lavitra mihoatra noho ireo mpifanandrina aminay izahay. Tokony hahay handamina mihoatra lavitra azy ireo.
Misy fampidirana lahatsoratra ihany koa ao amin'ny Blogalaxy For Global Democracy Afaka manantena haka lesona amin'izay niainan'i Nepal ireo firenena hafa izay miady ho an'ny demokrasia.
Kintana iray ny blaogy. Fa manana kintana maro ny blogalaxy. Manana blaogy manokana sy blaogim-bondrona maro ny blogalaxy iray ary mifamatotra avokoa izy ireo. Rafitra telo fototra no hanomezana hery ny hetsika demokratika rehetra: ny vola, ny hafatra, ary ny fikarakarana. Ireo blaogy no fomba tsara indrindra hamondronana azy telo ireo. Vitan'ny bilaogy ihany koa ny mampifanaraka ny politika amin'ny hafainganam-pandehan'ny fisainana. Hipetraka miaraka amin'ireo revolisionera eo ambony seza no hiafarànareo. Ho afaka hisintona fampianarana avy amin'ny vondrona iray hafa ny andiana firenena iray hafa, hisy teknika fampivadiana mifamatopatotra marobe amin'ny resaka tetikady fianarana, ny teknika ary ny fandrafetana an'ireo hafatra. Hahatsapa io fanohanana ara-moraly goavana io ny andiana firenena tsirairay. Tsy ho fikambanana voarakitra akory ny blogalaxy, fa fitaovan-tserasera iray fotsiny manana fiantraikany mahomby amin'ireo fitaovam-pahefana telo, na dia mety hisy fikambanana marobe voarakitra ara-panjakana aza hiditra ao anatin'io.
Manana lahatsoratra marobe tena mahaliana ny United We Blog, UWB: Sarin'ireo Mpanohitra tao Dang, Efitra fitokanana rehefa mifidy ao Nepal , ireo Olona Nahilika tamin'ny Fifidianana, ny Andron'ny Fandatsaham-bato: Kathmandu Silent. Mandefa taratra ny volana, fa tsy ho volana velively ny takamoa manioy hazavana. Manao fifidianana ny demokrasia, fa tsy demokrasia akory ireo fifidianana. Mba misia milaza an'io amin'ny mpanjaka mpanao jadona ao Nepal.
Mitatitra i Samudaya avy ao Nepal hoe: Andro Mainty ao Basantapur. “Taorian'ny hetsipanoherana, nifanena tamin'i Gagan Thapa izahay. “Efatra taona nitorahana biriky”, hoy izy, “sady tsy nisy zavatra nandroso. Tsapako fa mahomby kokoa ny manolotra kabary roa noho ny roa andro anaovana korontana”.
Manana blaogin-dahatsary i Mero Sansar ahitana ny fitifirana rano nataon'ny Fanjakana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana.